आईपीसी: यो के हो र यसले लगानीलाई कसरी असर गर्दछ? | अर्थव्यवस्था वित्त
आईपीसी: यो के हो र यसले लगानीलाई कसरी असर गर्दछ?
जोस रीसियो | | मौद्रिक राजनीति, आर्थिक राजनीति
यस समयमा सबैभन्दा व्यापक प्रयोग हुने आर्थिक सर्त मध्ये एक आईपीसी हो। तर के हामी वास्तवमै यसको वास्तविक अर्थ जान्दछौं? ठिक छ, यो उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको लागि संक्षिप्त रूपसँग मिल्छ, र यो संख्यात्मक मान हो जुन प्रतिबिम्बित गर्दछ मूल्यहरु मा भिन्नता दिइएको अवधिमा। इक्विटी बजार र शेयर बजार मूल्यको विकासमा निश्चित प्रभावको साथ। यस सामान्य परिदृश्यबाट, यो सफलताको निश्चित ग्यारेन्टीको साथ वित्तीय बजारमा प्रवेश वा बाहिर निस्कनको लागि एक धेरै विश्वसनीय प्यारामिटर बन्न सक्छ।
सीपीआई पनि हाम्रो देशमा ज्याला र पेन्सनको समीक्षाका लागि सूचनाको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो। यसको विकासको लागि निर्णायक हुनु विशेष गरी यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको स्तर धेरै उच्च छ। पनि निर्धारण गर्न को लागी मौद्रिक नीति देश वा भौगोलिक क्षेत्रको, र यस अर्थमा यसको उत्कृष्ट उदाहरण यूरो क्षेत्रको विकासलाई बढावा दिन युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ECB) ले विकास गरिरहेको भूमिका हो। र पहिले २०० 2007 र २०० between बीचमा आएको गम्भीर आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन।
अर्कोतर्फ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पनि धेरै जसलाई सामान्य रूपमा चिनिन्छ एक संदर्भ स्रोतको रूपमा हुन धेरै निर्धारण गर्दछ "किनमेल टोकरी"। किनभने वास्तवमा, भाकपा मार्फत हामीलाई थाहा छ कसरी तथाकथित घरेलु अर्थतन्त्रको यो महत्त्वपूर्ण अंश विकसित हुँदैछ। र कुनै पनि केसमा, यसले परिवार वा व्यक्तिगत बजेटको तयारीमा प्रभाव पार्छ, सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई थाहा छ। तसर्थ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा सुरुबाट कल्पना गर्न सक्ने भन्दा बढि प्रभावहरू छन्।
1 उपभोक्ता मूल्यहरुको विकास
2 सूचकांकमा नकरात्मक प्रभाव
3 स्वायत्त समुदायहरू द्वारा दरहरू
4 मिलान मूल्य सूचकांक (HICP)
5 बिभिन्न मूल्य सूचकांक
6 शेयर बजार मा व्यापार परिणाम
उपभोक्ता मूल्यहरुको विकास
जनवरीमा सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को वार्षिक दर १.०% छ, जुन अघिल्लो महिना दर्ता भएको भन्दा दुई दशमौं कम छ, राष्ट्रिय सांख्यिकी संस्थान (आईएनई) ले दिएको पछिल्लो दरहरूको आधारमा। नकारात्मक प्रभाव जुन वार्षिक दरमा कमीमा बाहिर पर्दछ:
खाना र गैर मादक पेय पदार्थ, जसले यसको वार्षिक भिन्नता चारौं दशौंमा घट्छ र ०.0,9% मा राख्छ, माछा र शेलफिसको मूल्य स्थिरताका कारण २०१ 2018 मा दर्ता भएको वृद्धिको तुलनामा। यो पनि नोट गर्नुपर्दछ, यद्यपि यसको विपरीत दिशामा पनि वृद्धि यस आधिकारिक रिपोर्टको विचारमा गहुँ फलफूल र तरकारीको मूल्यमा कमी आएको छ।
ढुवानी–०.२% को दरको साथ, अघिल्लो महिनाको तुलनामा चार दशमौं तल, इन्धन र स्नेहकको मूल्य जनवरी २०१ in को तुलनामा यस महिना कम बढेको तथ्यको परिणामस्वरूप।
फुर्सत र संस्कृति, जसको वार्षिक भिन्नता आठ दशौंमा घट्यो, ०.० to %मा, पर्यटक प्याकेजको मूल्यमा कमी आएको कारण जुन अघिल्लो वर्षको जनवरीको तुलनामा यस महिना बढी छ।
सूचकांकमा नकरात्मक प्रभाव
यस अर्थमा, त्यहाँ केही सेगमेन्टहरू छन् जुन यस समयावधिमा कम सन्तुष्ट डाटा सिर्जना गरेको छ र त्यसले बढेको बाच्नको लागतमा प्रभाव पारेको छ। उदाहरण को लागी, कि हामी तल पर्दाफास:
लुगा र जुत्ता, –१.15,4..1,037% को दरसँग, जुन जाडो बिक्रीको प्रभाव झल्काउँछ। सामान्य सीपीआईमा यसको प्रभाव १.०.XNUMX is हो।
फुर्सत र संस्कृति, जसको –२..2,3% को भिन्नताले – ०.१। ० को प्रभाव पार्छ, र अधिकतरको लागि पर्यटक प्याकेजको मूल्यमा कमी आएको कारण प्रेरित गरिएको छ।
बस्ने ठाउँ, जसले –०..0,6% को दर र – ०.०0,076 an को प्रभाव प्रस्तुत गर्‍यो, ग्यासको मूल्यमा आएको गिरावटको परिणामस्वरूप र थोरै हदसम्म डिजललाई तताउने र बिजुलीका लागि।
घरेलु, जुन vari0,5% मा यसको भिन्नता राख्छ। घर टेक्सटाईल आईटमहरूको मूल्यमा कटौती यस विकासको बाहिर खडा छ। सामान्य समूहमा यस समूहको प्रभाव ०.०0,028२XNUMX छ।
होटल, क्याफे र रेस्टुरेन्ट, जसको – ०.२% को दर, जुन – ०.०२२ को प्रभाव छ, आवास सेवाहरूको मूल्यमा कमीको कारणले हो। यो पनि ध्यान दिनुहोस्, यद्यपि विपरीत दिशामा, रेस्टुरेन्टहरूको लागि मूल्य वृद्धि।
स्वायत्त समुदायहरू द्वारा दरहरू
उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा ध्यानमा राख्नको लागि अर्को प्रासंगिक पक्षहरू यो एक समान छैन। यदि होईन भने, यसको विपरित, एउटा स्वायत्त समुदायबाट अर्कोमा भिन्न हुन्छ र कहिलेकाँही तीक्ष्णताका साथ जसले धेरै ध्यान तान्दछ, दुबै अर्थशास्त्रीहरू र प्रयोगकर्ताहरूलाई। यस अर्थमा र राष्ट्रिय सांख्यिकी संस्थान (आईएनई) ले भर्खरका आधिकारिक तथ्या .्कका आधारमा यो कुरा स्पष्ट छ कि बृहत् सिपीआईको वार्षिक दर डिसेम्बरको तुलनामा जनवरीमा १ 14 स्वायत्त समुदायमा घट्यो र बाँकी तीनमा रह्यो।
सबैभन्दा ठूलो कमी कास्टिला-ला मञ्चामा हुन्छ, पाँच दशांश को एक ड्रप संग। तिनीहरूको पक्षका लागि, समुदायहरू जसले आफ्नो वार्षिक दर कायम गर्दछ Illes Balears, Comunidad Fonal de Navarra र País Vasco हुन्। अर्थव्यवस्थामा लचिलोपनको संकेतको रूपमा र सम्पूर्ण सीपीआईले समग्रमा एक राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्यको अवस्थामा सब भन्दा सान्दर्भिक मानदण्डहरू निर्धारण गर्दछ। उदाहरण को लागी, यस मामला मा स्पेनिश एक। अन्य प्राविधिक विचारहरू पछाडि उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा अर्को लेखमा विश्लेषण गरिनु पर्छ।
मिलान मूल्य सूचकांक (HICP)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा यो अर्को भिन्नता हो र यसले विशेष प्रासंगिकताको तथ्या of्कीय सूचकलाई जनाउँछ र जसको उद्देश्य भनेको मुद्रास्फीतिको साझा उपाय प्रदान गर्नु हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय तुलनालाई अनुमति दिन्छ। ताकि यस तरिकाले यो द्वारा सम्भव भएको यस मामलामा अनुपालन जाँच गर्न पनि सम्भव छ मास्ट्रिक्ट सन्धि मौद्रिक संघमा प्रवेशका लागि। यस दृष्टिकोणबाट, यो एक आर्थिक प्यारामिटर हुन सक्छ कि एक देश मा बस्ने को लागत मा एक ठूलो प्रभाव छ।
अर्कोतर्फ, यो नोट गर्नुपर्दछ कि गत जनवरीमा एचआईसीपीको वार्षिक भिन्नता १.०% छ, जुन अघिल्लो महिना दर्ता भएको दुई दशमौं भन्दा कम हो। तसर्थ, यस विश्लेषण अवधि मा HICP को मासिक भिन्नता –1,0% छ। जबकि यसको विपरित, जनवरीको महीनामामा सीपीआईको वार्षिक भिन्नता दर लगातार करहरू (सीपीआई आईसी) ०.0,9% खडा छ, सामान्य सीपीआई द्वारा दर्ता गरिएको भन्दा दशौं भन्दा कम। सीपीआई-आईसी को मासिक परिवर्तन दर यस विश्लेषण अवधि मा –1,4% छ। यसको अंशको लागि, लगातार करहरू (आईपीसीए-आईसी) मा एचआईसीपीले वार्षिक दर १.०% प्रस्तुत गर्दछ, एचआईसीपीको समान।
बिभिन्न मूल्य सूचकांक
तपाईले यस लेखमा हेर्नु भएको छ, सीपीआईको एक विशेषता यो छ कि यो विभिन्न ढाँचा अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ, जस्तै कन्स्टन्ट ट्याक्स (आईपीसीए-आईसी)। र यसले पारिवारिक अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा अझ धेरै वास्तविक दर्शन प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। अचम्म होइन, केवल किनमेल कार्ट मा वृद्धि, तर धितो loansण वा औषधि उत्पादनहरूमा ठाउँ लिने खर्चको वास्तविक राज्य। र त्यो सरकारको लागि आर्थिक उपाय वा श्रम वा समाजको सबसे वंचित क्षेत्रहरु को लागी सहायता उपायहरु को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यसकारण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक धेरै प्रयोगकर्ताहरूले सुरूमा विश्वास गरे भन्दा बढी सान्दर्भिक छ। तपाईंको जस्तो मनपर्दैन लगानी मा प्रभाव इक्विटी बजारमा विकसित। जहाँ यसको घटनाहरू फरक लेखहरूको लागि कम हुँदैछ जुन अन्य लेखहरूको विषय हुनेछ। जे भए पनि यसले शेयर बजारको मूल्य बढ्न वा यी आर्थिक मापदण्डहरूमा आधारित पतनको लागि मद्दत गर्दैन। इक्विटी बजार को मुख्य सूचकांक मा देखा परेको छ।
शेयर बजार मा व्यापार परिणाम
इक्विटी बजारमा सूचीबद्ध कम्पनीहरूको विशुद्ध व्यापार परिणामले शेयर बजारमा बढी प्रभाव पार्छ। यस अर्थमा, जानकारीको एक धेरै महत्त्वपूर्ण अंश भनेको आईबेक्स make 35 बनाउने कम्पनीहरूले गत बर्ष बन्द गरे नाफा वृद्धि। यी डाटाले companies 35 कम्पनीहरूको नतिजा समावेश गर्दछ जुन छनौट गर्दछ। सूचीबद्ध कम्पनीहरूले अधिक जटिल क्वार्टरहरू र कठिन आर्थिक वातावरण तिनीहरूले पार गरिरहेका छन् पार गर्न व्यवस्थित गरेका छन्। तर यसको लाभको वृद्धि दर २०१ 2017 को बाह्र महिनाको सम्बन्धमा ढिलो भएको छ।
बिजुली क्षेत्रका कम्पनीहरूले फेरि नाफाको नेतृत्व गरे, जसमा करिब of% ले वृद्धि भयो, र%% को राजस्व बृद्धि संग लागतको तुलनामा%%। यी डाटा हुन् जुन साना र मध्यम आकारका लगानीकर्ताहरूसँग पछ्याउँछन् जसले आफैंको कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्यमा बढी प्रभाव पार्दछ जीवनको लागतको तुलनामा। र त्यो अन्य अन्तर्राष्ट्रिय इक्विटी बजारहरूमा पनि लागू गर्न सकिन्छ, हालसालैका वर्षहरूमा देखाईएको छ। र त्यसले निर्धारण गर्दछ कि एक क्षणमा त्यहाँ किनमेल वा बेच्ने दवाव छ।
सूचीबद्ध कम्पनीहरूले अधिक जटिल क्वार्टरहरू र कठिन आर्थिक वातावरण तिनीहरूले पार गरिरहेका छन् पार गर्न व्यवस्थित गरेका छन्। तर यसको लाभको वृद्धि दर २०१ 2017 को बाह्र महिनाको सम्बन्धमा ढिलो भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » आर्थिक राजनीति » आईपीसी: यो के हो र यसले लगानीलाई कसरी असर गर्दछ?